NS Media | ‘मेरो उद्देश्य नै जनताको सेवा र विकास निर्माण गर्नु हो’
जिल्ला – सेरोफेरो
अर्जुन शाहीको नेतृत्वमा : पल शाहा टिम र हाम्रो टिम नेपाल लाई भब्य स्वागत रास्कोट मा
कर्णाली प्रदेश समाज कान्तो(टोकियो ) जापान र टिम पल शाहको संयुक्तमा स्वास्थ सामाग्री र खाद्यान्न लियर दैलेख कालिकोट जादै
हाम्रो टिम नेपाल र पल शाहा टिम स्वास्थ्य सामाग्री लगायत राहात को साथमा कालिकोट आऊदै
ज्ञानेन्द्र शाही: को टिम लाई हात’पात गर्ने ग्याङ ले मागे माफि
एकीकृत जनक्रान्तिकोमा गोलबन्ध भई दलालहरुको विकल्प बनौ : बिजयकुमार
दलित प्रतिको हेर्ने दृष्टकोण र हेपाहा प्रवृति थाहा पाए पछि मेरो मम्मी डराउन थाल्नु भयो
‘मेरो उद्देश्य नै जनताको सेवा र विकास निर्माण गर्नु हो’
रुबिभ्याली गाउँपालिका–३, धादिङ
धादिङ जिल्लाको उत्तरीभेगमा अवस्थित रुबिभ्याली गाउँपालिकाले जनताको दैनिकीसँग जोडिएको सडक निर्माणसँगै कृषि, स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी, पर्यटनलगायतको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार गठन भएपछि गाउँपालिकाले नागरिकलाई कसरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ ? भावी योजना र समृद्ध गाउँपालिका बनाउने योजना लगायतको विषयमा रुबिभ्याली गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कामीलाल तामाङसँग गरिएको कुराकानीः
तपाईको राजनितिमा प्रवेश कहिले भयो ?
मेरो राजनितिक सुरुवात पञ्चायतकाल हुँदै बहुदलमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गाविस उपाध्यक्षको दाबेदारका रुपमा २०४८ सालमा औपचारीक प्रवेश भएको हो । पार्टीको विभिन्न जिम्मेवारीहरु सम्हाल्दै पार्टीले अगाडी सारेर नै आज यो अवस्थामा छु । पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष र द्धन्द्धकाबीच म आफ्नो सहनसिलताले नै आज जनताको सेवा गर्ने मौका पाएको छु । म कहिले पनि पद र लोभलालचमा लागिन, मेरो उद्देश्य भन्नु नै जनतालाई सुलभ सेवा र कसरी विकास निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लिएर अहिले नेपाल सरकारको स्थानिय सरकार अन्र्तगत रुबिभ्यालीको वडा अध्यक्ष छु ।
गाउँपालिकाभित्र वडास्तरमा के कस्ता विकास निर्माण गर्नुभयो ?
पालिकामा वडा–३ ले सबैभन्दा पहिला आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ । अब सडक निर्माण कार्य हालसालै मात्रै गाउँपालिकामा प्रवेश भएको हो । गाउँपालिकाको ६ वटै वडामा सडक विस्तारको क्रम जारी छ । गाउँपालिकाले यस आर्थिक वर्षका लागि विशेष प्राथमिकता सहित बजेट सडकमा लगानी गरेको छ । सडकको स्तरोन्नति गर्ने काम भएको छ । नयाँ ट्रयाकहरु निर्माण गर्ने क्रम तिब्र गतिमा भईरहेको छ । भत्किएका बिग्रिएका सडक निर्माण गरेर सहजरूपमा यातायात सञ्चालन गर्ने काममा गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकता राखेको छ । आगामी २ वर्षभित्र गाउँपालिकाको केन्द्रसम्मको सडक पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै बन फडानीमा रोक लगाएका छौं र जंगली वन्यजन्तुको संरक्षणका निम्ति सिकारीहरुको बन्दुक बरामद गरि जिल्लामा बुझाईएको छ । साथै विभिन्न मर्मतसम्भार एवंम विकास निर्माणकाका योजनाहरु भईरहेको अवस्था छ ।
विद्युतीकरणको काम के–कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
गाउँपालिकाको अधिकांश स्थानमा विद्युतीकरण भइसकेको छ । गाउँपालिका–३ सेर्तुङमा खोल्पी लघुवित्त जलविद्युत आयोजनाले १०० किलो वाटको बिजुली निकालि दिएको छ, मुख्य ट्रान्समिटरमा समस्या भएको कारण हालै यसको मर्मत कार्यमा केही ढिला भएकोले स्थानीय जनताहरु मर्कामा परेका छन् । यसको मर्मतसम्भारको काम अगाडी बढि सकेको छ । गाउँपालिकाले १५ लाख रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन गरिसकेको छ ।
गाउँपालिकाभित्र कुनै पनि नागरिक विद्युतबाट वञ्चिन नहुन भन्ने हाम्रो चाहना हो ।
खानेपानीको अवस्था कस्तो छ ?
गाउँपालिकाभित्र खानेपानीको स्रोत पर्याप्त छ । तर, हामीले भनेको जस्तो व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । गाउँपालिकाभित्र रहेको प्रत्येक घरमा धारो पुर्याउने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ । विगतदेखि नै खानेपानीका योजना सञ्चालन भए पनि प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि खानेपानी लगायतका विकास निर्माणको काममा तीव्रता आएको छ । साथै विभिन्न संघसंस्थाहरुको सहयोगमा खानेपानीको व्यवस्था सहज भएको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना के छ ?
गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता नै कृषिमा आधुनिकीकरण हो । गाउँपालिकाभित्र भइरहेको परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने आधार नै कृषि हो । गाउँपालिकालाई फलफुलमा स्याउ खेती, आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने, मकै, कोदोे लगायत व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती कृषिका लागि उर्वर भूमि मानिन्छ ।
साथै गाउँपालिकाभित्र विभिन्न जडीबुटीहरु प्रशस्त मात्रामा पाईन्छ, यसलाई पालिकाले व्यवस्थित तरिकाले निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न के योजना छ ?
गाउँपालिकाभित्र अहिलेसम्म अस्पताल छैन । हालै निर्माणधिन अवस्थामा भने रहेको छ । स्वास्थ्यचौकीबाट सेवासुविधा दिईरहेका छौं । हामीले गाउँपालिकाको हरेक वडामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सक्दो जनतालाई उपचारको सेवा सुविधा दिने प्रयत्नमा लागि परेका छौं । अब चाँडै नै गाउँपालिकामा अस्पताल सुचारु गर्छौं ।
स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्न गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
गाउँपालिकाभित्र भएको स्रोत र साधानलाई अधिकतम परिचालन गरेर स्थानिय बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा आफ्नै गाउँघरमा बसेर रोजगारी गर्न चाहनेहरूलाई गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेर वातावरण सिर्जना गर्नेछ ।
कृषि तथा जडिबुटीको पकेट क्षेत्र स्थापना गरेर व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने, पशुपालन गर्ने लक्ष्य छ । जडीबुटी र पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने, आलुको पकेट क्षेत्र बनाउने, फार्म सञ्चालन गर्ने, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिने यी काम गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं । काम गर्ने युवाहरूलाई विदेश जान नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्छौं ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास के योजना छ ?
रुबिभ्याली गाउँपालिकाभित्र पर्यटन क्षेत्रको राम्रो सम्भावना रहेको छ । रुबिभ्याली विशेष पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा चिनिँदै आएको छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई पनि एकसाथ अगाडि बढाएर लागेको अवस्था छ । यहाँ पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने कुनै किसिमको कमि कम्जोरीहरु छैन । प्राकृतिक तातोपानीको स्नानदेखि हिमालको मनोरमदृष्य लगायत यहाँको कला संस्कृति विशेष रहेको छ ।
वडाले कोरोनाबाट बच्न के कस्ता सुरक्षा अपनाएको छ ?
६ वडासहित गाउँपालिकाले पूर्णरुपमा कोरोनाको सुरक्षाको निम्ति सतर्कता अपनाएको छ । पालिकाको आफ्नो हरेक नाकामा चेकजाँचको व्यवस्था मिलाएका छौं । क्वारेन्टाईनको व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । रुबीभ्याली अहिलेसम्म कोरोनामुक्त नै छ । भविष्यमा यसको रोकथामको लागि विशेष निगरानी र सतर्कता सहित सुरक्षानिति अपनाईएको छ । सम्पूर्ण नेपालीहरु एवंम रुबीभ्याली वासीमा कोरोनाबाट आफ्नो सुरक्षा आफै गरौं र सुरक्षित रहौं ।
कुनै घट्ना भय कल गर्नुहोस्
यन यश मिडिया नेपाल डट कम तथ्यको आधारमा सत्य स्थापित गर्ने मुल लक्ष्यका साथ नेपाली भाषामा सञ्चालित नेपालको डिजिटल सन्चार माध्याम हो ।
D.N.S. Media PVT. LTD
तुलराज तिरुवा, सुर्खेत
CopyRight @ 2021 NS Media. All Right Reserved.